Iintlanzi zeBotia Yoyo | Ngeentlanzi
IBotia Yoyo Intlanzi
Enye ye ezona ntlanzi zibalulekileyo Ngenxa yeemeko zabo zomzimba, ziintlanzi zeBotia Yoyo, ezaziwa ngegama labo lezenzululwazi uBotia Lohachata kwaye osapho lakwaCobitidae. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezi zilwanyana zivela kwilizwekazi laseAsia, kanye ukusuka eIndiya nasePakistan, apho zihlala emanzini ashushu afudumeleyo.
Los UBotia YoyoBabonakaliswe ngokungabinazo izikali, kunye nemibala eyahlukeneyo emzimbeni wabo, enamabala amnyama abenza ukuba babethe. Ukongeza, banobuchwephesha bokuba neebhanti ezi-4 kufutshane nomlomo wazo. Ezi zilwanyana zincinci zifikelela kubukhulu obufikelela kwiisentimitha ezili-10, kwaye zingaphila phakathi kweminyaka esi-8 ukuya kweli-10.
Ukuba unomdla wokuba nolu hlobo lweentlanzi kwi-aquarium yakho, kuya kufuneka uyazi ukuba zilungele abo bantu. Iintlanzi ezibaxekileyonjengoko kufuneka babe namava e-aquarium. Ukongeza koku, kubalulekile ukuba wazi ukuba bafuna ukhathalelo oluthile, njengobungakanani be-aquarium ekufuneka ibengaphezulu kweesentimitha ezingama-60, iqondo lobushushu lamanzi phakathi kwama-24 nama-30 amaCelsius, ubunzima be-5 ukuya kwi-8 kunye pH ka-6 ukuya ku-8.
Kubalulekile ukuba ugcine engqondweni ukuba utshintsho lwamanzi Zifanele ukuba veki zonke, ukuze ngale ndlela iimeko zihlale zikwimeko efanelekileyo kwaye zilungelelene. Ukuhonjiswa kwamachibi kufanele ukuba kube neengodo, izityalo ezidadayo kunye namatye avumela izilwanyana ukuba zisebenzise njengeendawo zokufihla. Ungalibali ukuba iintlanzi zeBotia Yoyo kufuneka zihlale kwindawo ezinamanzi oluntu ukuze ziphile ngcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » IBotia Yoyo Intlanzi
Intlanzi ejongene nehashe ejongene nehashe